Best MP3 Tagger for Windows Mac OSLinux
Best MP3 Tagger for Windows / Mac OS / Linux
A ururinta audio qas ka badan oo ma fududa in uu abaabulo, laakiin markii kuwii vibes perfectionist in laado, waxaan kaliya oo aan is-hor taagi raadinaya karaan si ay u abaabulaan kijinka sidii si fudud oo si deg deg ah intii suurto gal ah. In article soo socda, aynu eegno qaar ka mid ah kuwa ugu wanaagsan mp3 taggers diyaar u Windows, MAC iyo Linux. Laga bilaabo Windows, shaki la'aan, OS inta badan la isticmaalo oo dhan, ka dib markii 3 mp3 taggers ma aha oo kaliya mid aad u fudud in ay isticmaalaan, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan tiro badan oo ah functionalities ku xirmo hal.
Qaybta I. MP3 Tagger Best for Windows
Qaybta II. Best MP3 Tagger u Mac OS
Qaybta III. Best MP3 Tagger u Linux
Kuwa soo socda 3 mp3 taggers waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan tiro badan oo ah functionalities ku xirmo hal ma aha oo kaliya.
Product Name 1. MediaMonkey 2. Mp3tag 3. TuneUp
Link http://www.mediamonkey.com/ download / http://www.mp3tag.de/en/ http://www.tuneupmedia.com/
Faa'iido Easy in ay isticmaalaan, u shaqeeya labada tags iyo farshaxanka album No xayiraad, lacag la'aan ah oo dhan U shaqeeya labada tags iyo farshaxanka album
Qasaarooyinka Xoogaa qaali ah Functions Limited heli karaa Functions Limited heli karaa
Qaabab ay taageerayaan MP3, AAC (M4A), OGG, WMA, FLAC, MPC, regelingen, CDA,
AVI, MP4, OGV, MPEG, wmv, M3U, PLS, iwm AAC, DSF, FLAC, daanyeer, MP3, MP4, M4A, M4B, M4V,
MPC, OGG, OPUS, OFR / OFS, SPX, Tak, TTA, WMA. WV MP3 iyo M4A
Daanyeer Media ka dhigaysa isticmaalka database Freedb ee tags iyo Amazon u maqan cover tahay. Waa ma aha oo kaliya fudud tag nadiifsan laakiin sidoo kale duwan oo caan ah si Lugood. Media Daanyeer bixisaa jiita free dhex dhexaad ka kaaftoomi iyo hoos u interface oo xataa users markii ugu horeysay si fudud u fahmi karaa oo baran karaa wakhti ka waynay. All inaad samayso waa dajiyaan aad audio files si MediaMonkey ka dibna waxa ay si toos ah u iskaan lahaa / tags kharribeen tahay album ka maqan oo la waayay iyo iyaga ka dhigi doonaa gal gaar ah halkan ka taas oo mid aad u fudud in ay iyaga la kala saaro dadka kale. Marka aad kuwan tags go'an, waxay kaa caawin doontaa in aad iyaga kala soocaan oo ay si toos ah iyaga gelinayn meelaha ay iyagoo eegaya ay tags kala ID3.
Mp3tag waa aalad fudud si uu kaaga caawiyo in aad abaabulo oo loo maareeyo playlists aad la taageero loogu dabool tahay. Waxay ka dhigaysa isticmaalka FreeDB, Amazon, Discogs.com iyo MusicBrainz si ay kuu siiyaan ah waayo-aragnimo urur la yaab leh. Sidaa darteed waa software si xor ah, waxa aanu aad u xaddido in tiro kooban oo songs / albums oo waa faa'iido dheeraad ah!
TuneUp waa qalab dheeraad ah oo ka shaqaysa garab Lugood. Marka bixi, aad si fudud u furi kartaa iyo jiididda la doonayo songs galay galeeysid ee falanqaynta. Waxaa iyaga loo hubiyo lahaa khaldan / tags maqan iyo mar dhameysatay, iyaga oo dhan qor lahaa oo sug aad ogolaansho ka hor inta iyaga ku beddelaan. Waxaa qoreysa laba nooc; asaasiga ah iyo dahab.
Qaybta II. Best MP3 Tagger u MAC
Kuwani 3 mp3 taggers yihiin kaliya waxa milkiilaha MAC leh ururinta audio kharriban u baahan yahay.
Product Name 1. Kid3 2. ID3 Editor 3. Tagr
http://www.macupdate.com/ app / Mac / 30610 / tagr
Price Free $ 15.00 $ 9.99
Faa'iido Sidoo kale shaqayn kara sida ciyaaryahan madax banaan audio Miyuu interface ah user garaafyada iyo sidoo kale interface line amarka ah. Ogolaataa user si aad gunta Easy in ay isticmaalaan, interface oo quruxsan
Qasaarooyinka Kaliya functionalities kooban oo la hayo Taageerada qaab MP3 kaliya Kaliya functionalities kooban oo la hayo
Qaabab ay taageerayaan MP3, Ogg / Vorbis, DSF, FLAC, MPC, MP4 / AAC,
MP2, Opus, Speex, TrueAudio, WavPack, WMA, regelingen,
files AIFF iyo modules tracker (mod, S3M, IT, XM) MP3 MP3, M4A (MP4)
Kid3 waa mp3 tagger awood MAC OS X iyo waxa laga heli karaa sida il software furan. Waxa ay taageertaa kala duwan oo badan oo qaabab audio iyo waxaa loo isticmaali karaa sida ciyaaryahan audio aad u bartey, laakiin waa awood u ciyaaro files regelingen. Taageerada tahay album sidoo kale kasoo muuqday hab jiita iyo hoos u fudud.
ID3 editor ka software pa waa fudud mp3 tagger la taageero labada MAC OS X iyo Windows. Waxaan ku faantaa oo quruxsan garaafyada interface user a iyo sidoo kale interface line amarka ka mid ah oo aad dooran kartaa in aad ku xiran tahay fudayd korkiisa ah. Waxa kale oo ay awood u isticmaala inay dib u soo ceshano farshaxanka album maqan.
Tagr waa mp3 tagger kuwa is-hoosaysiiya, waayo, MAC OS X oo taageero u mp3 mp4 iyo qaabab. Qoreysa I fudud ah si ay u isticmaalaan interface oo kuu ogolaanaysaa inaad tags edit iyo waqti isku mid ah taageertaa tagging si toos ah ay gacan saar la leeyihiin database-Discogs.com iyo Amazon. Waxa kale oo ay taageertaa wax kaqabashada farshaxanka maqan.
Linux ma noqon karaan in si weyn loo isticmaalo, laakiin waxaan u hubiso in ay leeyihiin qaar ka mid ah Sweden casriga ah waxaa jecel in ay ka shaqeeyaan heer techy. Waayo, kuwa casriga ah-oo danbaysa waxaan heysanaa soo socda saddex taggers mp3, kaas oo kaa caawin doona iyaga abaabula ururinta.
Product Name 1. puddletag 2. EasyTAG 3. Picard
Faa'iido Easy in ay isticmaalaan leh user saaxiibtinimo interface Warqadaha iyo Casharrada fudud loo heli karo Simple iyo fududahay in la isticmaalo
Qasaarooyinka Kaliya taageertaa qaab MP3 Waxay noqon karaan wax yar u badneyd u noqonayaan arday Waxay bixiyaan oo kaliya hawlaha aad aasaasiga ah
Qaabab ay taageerayaan MP3 MP3 MP2, FLAC, OGG VORBIS, MP4 / M4A / AAC,
MUSEPACK, daanyeer MP3, FLAC, OGG, M4A, WMA, regelingen
puddletag qoreysa ilo tag sida Amazon, Discogs.com, FreeDB iyo Musicbrainz in Eebe idin ​​ku ool ah DEAD aad ururinta audio. Way fududahay in la isticmaalo iyada oo taageero u qabnay dadka isticmaala khibrad leh. Waxa kale oo ay awood u isticmaala inay "tag mass" Cajalado la doonayo. Waxa kale oo aad ka heli kartaa waxa Casharrada ka fiican in la fahmo functionalities in ay bixisaa oo ag maraya in http://puddletag.sourceforge.net/docs.html.
Easytag isticmaalaa gtk + interface si aad u eegto, edit iyo tags mp3 ee files audio ka qoro. Waa bilaash in la isticmaalo iyo qoreysa taageero u qaabab badan oo maqal ah. Waxaad kalood ka Easytag bixisaa user la auto tagging iyo taageero CDDB.
Iyada oo awood u leh inay kor u CD-yada, faraha Accoust Audio iyo muuqan MusicBrainz database weyn, Picard waa mp3 tagger dareen diyaar u ah labada isticmaala Windows iyo Linux. Waxay bixisaa shaqeynta madal iskutallaabtiisa waa il furan waa doorasho weyn oo dhan isticmaala Linux halkaas samaynta.
Sida loo Download / Record / Beddelaan AOL Radio Music in MP3
Sida loo Waraaqda MP3 Audio ka QuickTime (MOV)
Sida loo badalo m2ts in mp3 on daaqadaha iyo Mac
> Resource > MP3 > Best MP3 Tagger for Windows Mac OS Linux